Markab Iiraan laga leeyahay ayaa hawlgal kalluumaysi sharci darro ee ugu weyn adduunka ka wada biyaha Soomaaliya - Tilmaan Media
Xayn Maraakiib kalluumaysi oo aad u weyn ayaa waxaa lagu arkay iyaga oo si sharci darro ah uga kalluumaysanaya biyaha badweynta Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya oo aan awood u lahayn in ay waardiye ka qabato xeebaheeda ayaa walaac ka muujisay arrintan iyadoo dawladda Iiraan ka dalbatay in ay baaritaan ku samayso markabka.
Warbixinno ay soo saareen Hay’adda Global Fishing Watch, oo ah hay’ad daba gal ku samaysa maraakiibta sida sharci darrada u kalluumaysta ayaa hawlgalka markabkan xaddiga weyn waxa ay ku tilmaantay in uu wado hawlaha kalluumaysiga sharci darrada ugu weyn adduunka.
CaCaddaymay hay’adda soo ururisay ayaa sheegaysa in kooxdan maraakiibta Iiraaniga ay ay tiradooda gaarayso 192 markab taas oo ka dhigan lix laabka tirada 31-ka maraakiibta Shiinaha ee ay dawladdu u oggolaatay in ay biyaha Soomaaliya ka kalluumaystaan.
Waxaa la sheegayaa in maraakiibtan ay hawlahooda wadeen laga billaabo billowgii sanadkii hore 2019-ka. Qaarkood ayaa waxaa lagu arkay meelo u dhow xeebaha loogu tala galay kalluumaysatada caadiga ah.
Maraakiibta noocan oo kale ah ayaa waxa ay baabi’iyaan kayda kalluunka ee biyaha iyagoo si arxan darro ah u soo xaaqa kalluunka iyo dhashiisa. Tani oo haddii aan wax laga qaban khasaaro badan u keeni karta Soomaaliya.